Matio 27: 1-66
Matio 26 Matio 27 Matio 28
Ary nony maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loholona dia niara-nihevitra hiampanga an' i Jesosy mba hamonoany Azy.
ka nanao hoe: Nanota aho, satria, namadika ra marina. Fa hoy ireo : Ahoanay izany? fa asa anao.
Ary ny lohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe: Tsy mety raha alatsaka ao amin'ny rakitry ny tempoly io, fa vidin-dra.
Koa izany no anaovana ny anaran'izany saha izany mandraka androany hoe: Sahan-dra.
Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina an'i Jeremia mpaminany hoe: "Dia nalainy ny sekely volafotsy telo-polo, vidin'ilay notombanana, dia ilay notombanan'ny Zanak'Isiraely,
ka nomeny hamidy ny sahan'ny mpanefy vilany izany, araka izay efa nandidian'i Jehovah ahy" (Jer.18. 2; Zak.11.13).
Ary no lohan'ny mpisorona mbamin'ny loholona nitaona ny vahoaka mba hangataka an'i Barabasy ary hamono an'i Jesosy.
Hoy Pilato taminy: Ka ahoana kosa ary no hataoko amin'i Jesosy, Izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra: Aoka hohomboana amin'ny hazofijaliana Izy.
Fa hoy ny governora: Inona ary no ratsy nataony? Fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe: Aoka hohomboana amin'ny hazofijaliana Izy!
Ary raha hitan'i Pilato, fa tsy nahaleo ditra azy izy, fa vao mainka nandroso ihany aza ny tabataba, dia naka rano izy ka nanasa tànana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe: Afaka amin'ny ran' ity Lehilahy marina ity aho, fa asa anareo.
Ary ny olona rehetra dia namaly ka nanao hoe: Aoka ny rany ho aminay mbamin'ny zanakay.
Ary dia nandefa an'i Barabasy ho an'ny olona izy; fa Jesosy nasainy nokapohina, dia natolony mba hohomboana tamin'ny hazofijaliana.
Ary ny miaramilan'ny governora dia nitondra an'i Jesosy ho ao anati-rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy.
Dia nororany Izy, ary nalainy ny volotara, ka nokapohiny ny lohany.
Ary rehefa naneso Azy izy, dia nanala ilay lamba taminy, ka nampitafiny Azy indray ny fitafiany, ary dia nentiny Izy mba hohomboana amin'ny hazofijaliana.
Ary raha nandeha izy, dia nahita lehilahy Kyreniana anankiray, atao hoe Simona, ka izy notereny hitondra ny hazofijalian'i Jesosy.
Ary rehefa voahombony tamin'ny hazofijaliana Izy, dia nanaovany loka ny fizàrany ny fitafiany.
Ary napetany teo ambonin'ny lohany ny soratra milaza ny nanamelohana Azy, dia izao: ITY NO JESOSY, MPANJAKAN' NY JIOSY.
Ary nisy jiolahy roa nohomboana tamin'ny hazofijaliana teo an-daniny roa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany, ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany.
Ary izay nandalo dia niteny ratsy Azy, sady nihifikifi-doha
ka nanao hoe: Ry ilay mandrava ny tempoly sy manangana azy amin'ny hateloana, vonjeo ny tenanao. Raha Zanak'Andriamanitra Hianao, midìna hiala amin'ny hazofijaliana.
Ny sasany novonjeny; fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'ny Isiraely Izy, aoka hidina hiala amin'ny hazofijaliana Izy ankehitriny, dia hino Azy izahay;
natoky an' Andriamanitra Izy, aoka Izy hamonjy Azy ankehitriny, raha ankasitrahany Izy ( Sal.22.8), satria hoy Izy: Zanak'Andriamanitra Aho.
Ary nandatsa Azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka nohomboana taminy tamin'ny hazofijaliana.
Ary nony tokony ho tamin'ny ora fahasivy, dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Ely, Ely, lamà sabaktany? izany hoe: Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao? ( Sal.22.1).
Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo, raha nandre izany, dia nanao hoe: Miantso an' i Elia Ilehio.
Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia nihazakazaka ka nandray sipaonjy, ary rehefa natsobony tamin'ny vinaingitra izany ka notohiziny tamin'ny volotara, dia natohony hotsentsefin'i Jesosy.
Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny.
ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorian'ny nitsanganan'i Jesosy, dia nankao amin'ny Tanàna Masina ka niseho tamin'ny maro.
Ary ny kapiteny sy ny fehiny, izay niambina an' i Jesosy, raha nahita ny horohoron-tany mbamin'izay zavatra tonga teo, dia raiki-tahotra indrindra ka nanao hoe: Marina tokoa fa Zanak'Andriamanitra io Lehilahy io.
Isan'ireny Maria Magdalena sy Maria, renin'i Jakoba sy Josesy, ary renin'ny zanak'i Zebedio.
Izany lehilahy izany dia nankao amin'i Pilato ka nangataka ny fatin' i Jesosy. Dia nasain'i Pilato homena azy izany.
dia naleviny tao amin'ny fasany vaovao, izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy; ary rehefa nanakodia vato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy, dia lasa nandeha.
Ary nony ampitson'ny andro fiomanana, dia nivory nankeo amin' i Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny Fariseo
Hoy Pilato taminy: Makà mpiambina ka mandehana, ary ataovy mafy araka izay hainareo ny fiambenana.